Izindlu e- Sienna
Szczecin, Zachodniopomorskie, i-Poland
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Dariusz
I-Sienna Apartment ingu-65m2 futhi itholakala cishe enkabeni ye-Szczecin, amamitha angu-200 kuphela ukusuka e-Oder nase-Boulevards, cishe amamitha angu-400 ukusuka ePomeranian Dukes' Castle futhi cishe amamitha angu-800 ukusuka e-Wały Chrobrego. Kunezindawo eziningi zokucima ukoma nezindawo zokudlela eziningi e-Old Town. I-Sienna Apartment iyisisekelo esihle sokubuka indawo nokuphumula. Inamagumbi angu-2 anekhishi, igumbi lokugezela nendlu yangasese, i-inthanethi yamahhala kanye no-65 "TV.
Ifulethi litholakala esitezi sesi-2 ngombono omuhle weSienna Market Square. Indawo ephelele cishe 65 m2. Ikhishi linezitsha, izitsha, i-cutlery, iketela, ihhavini ye-microwave, umshini wokugeza izitsha nesiqandisi (akukhohhavini).
Igumbi lokulala lifakwe umbhede omkhulu onethezekile ophindwe kabili, amatafula aseceleni kombhede anamalambu nesifuba esivulekile samadrowa. Usofa osendlini yokuphumula unosofa ogoqiwe. Indlu yokugezela ivulekile kakhulu enendawo yokugeza ehlukile - ubhavu osebenza njengechibi lokugwedla + isikrini sokugeza ingilazi kanye nendlu yangasese.
Yindawo entsha ngokuphelele enemishini
Ama-pubs nezindawo zokudlela eziningi ngokwezwi nezwi "zikhona lapho", vele wehlele phansi. Ngamunye wabo unikeza ukudla okuhlukile futhi wonke umuntu uzozitholela okuthile.
Amahora okuthula asebenza kubo bonke abahlali nabanikazi bezindlu phakathi 23-6. Akunakwenzeka ukuhlela noma yimiphi imicimbi ekhethekile noma imicimbi yotshwala futhi kwenqatshelwe ngokuphelele !!! Sicela ungaqashi indawo yokuhlala ngaphansi kwale akhawunti. Akuvunyelwe ukubhema efulethini nasezitebhisini. Umnikazi ubheka ifulethi futhi uhlala phansi phezulu.
Amahora okuthula asebenza kubo bonke abahlali nabanikazi bezindlu phakathi 23-6. Akunakwenzeka ukuhlela noma yimiphi imicimbi ekhethekile noma imicimbi yotshwala futhi kwenqatshelw…
UDariusz Ungumbungazi ovelele